DEG DEG:-Dagaal culus oo ka socda Galmudug iyo wararkii ugu dambeeyay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wararka aan ka heleyno deegaan hoostega Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug ayaa waxaa ay ku warramayaan in halkaas uu ka dhacay dagaal u dhexeeyay laba maleeshiyo beeleed.
Dagaalkaan ayaa waxaa uu sigaar ah uga dhacay deegaan lagu magaacabo Gadoon oo bari ka xiga Magaalada Dhuusamareeb, waxaana inta uu socday la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Dad ayaa ku warramay in dagaalkaas uu ka dambeeyay, kadib markii Nin hubeysan uu gelinkii dambe ee shalay weerar loo adeegsaday rasaas uu ku qaaday 5 qof oo ku sugnaa deegaanka Gadoon, waxaana weerarka ka dhashay khasaaro kala duwan.
Inta la xaqiijiyay qof ayaa ku geeriyooday weerarka, halka 4 qof kalena ay dhaawacyo kala duwan kasoo gaareen oo rasaasta lagu furay uga dhacday meelo halis ah, iyagoona la geeyay Xarun Caafimaad.
Wararka ayaa intaas waxaa ay kusii darayan in uu jiro khasaaro ka dhashay dagaalka, wallow aan la xaqiijin inta uu la egyahay, waxaana la sheegayaan in weli deegaanka ay ka jirto xaalad kacsanaan ah.
Deegaano ka tirsan Gobolka Galgaduud ayaa waxaa horey sidaan oo kale uga dhacay weeraro khasaaro kala duwan geystay iyo dilal qorsheysan oo la xiriiray aano aanooyin qabiil, waxaana Maamulka Galmuduguu ku guudldareystay wax ka qabashada falalkaas.